डा. केसीको माग पूरा नगरे आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको चेतावनी
२०७५ असार २६ मंगलबार १८:२७:००
काठमाडौं । जुम्लामा ११ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सरकारले यथाशिघ्र पूरा नगरे नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने जनाएको छ । मंगलबार पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दैे संघका आजिवन सदस्य डा. गोविन्द केसीको माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जायज रहेको भन्दै डा. केसीको माग पूरा नगरे सबै आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।